Sary ho an'ny fanahy
Inona no miseho rehefa maty?
Inona no Lazain'ny Baiboly Rehefa Maty?
Taratasy avy any an-danitra
Taratasy avy any amin'ny helo
Ny tranonay mandrakizay
Hitantana anao any an-danitra aho
Ny Fifandraisantsika any an-danitra
Ho Fantatrao ve any An-danitra?
Taratasy ho an'i Love
Fanasana hanaiky an'i Kristy
Fampaherezam-panahy nataon'i Bob Stern
Finoana sy porofo
Fandresena amin'ny pôrnôgrafia
Ny alina mangatsiakan'ny fanahy
Ny ora ao amin'ny fianakaviana
Ny Afoin'ny Fijaliana
Misy ny fanantenana
Trano sy trano fitobiana taloha
Mahita an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny natiora
Park National Park ao Gettysburg, PA
Fiakaran-drano sy onja
Fantatrao ve hoe iza i Jesosy?
Tsindrio eto raha hanoratana aingam-panahy:
Valiny ara-baiboly momba ny ara-panahy
Lanitra - Ilay fonenantsika mandrakizay
Inona no manjo ny fotoana rehefa maty?
VIew Ny tranokalan'ny sarin'ny natiora:
Trano antitra sy baran-trano taloha
Ny sary ho an'ny fanahy dia tranonkala iray natao hamporisihana ny mpino sy hanatratra fanahy very ho an'ny Tompo, indrindra ireo izay mahatsapa fa lavitry ny fahasoavan'Andriamanitra ka tsy ho voavonjy.
Isika dia mahita ny mpitsidika tsirairay ho fanahy mety hahazo antsika, ary ny Tompo dia nanao mihoatra noho izay rehetra efa noeritreretintsika, tamin'ny famonjeny ireo izay nanolotra ny filazantsara tamin'ny alalan'ny Photos for Souls.
Ankasitrahanay ny vavakareo amin'ny fangatahana ny fitahian'Andriamanitra amin'ity asa fanompoana ity, ary hanomanana ny fon'ny olona izay efa nitsidika ny tranokalanay, mba hiova ny fiainany, hanakaiky kokoa azy ireo.
Manasa anao izahay hitoetra araka izay tadiavinao, ary hijery ny tahirin-tsary momba ny natiora sy ny asa soratr'ireo tsindrimandry.
Aza misalasala misintona na manonta sary ao amin'ny galerianay, raha hampiasainao manokana, bala bala any am-piangonana, karatra sns… na hanampy ny rohy mankany amin'ny tranokalanao.
Misaotra ny fanohananareo amin'ny fiaraha-miasa aminay amin'ny fampielezana ny Filazantsara.
Ny drafitry ny famonjena Andriamanitra amin'ny fiteny samihafa
Loharano ho an'ny Fitomboanao ara-panahy sy ny maha-Mpianatr'i Kristy
Efa nahatsapa zavatra very ve ianao ary naniry fa nisy mpitarika haingana ho an'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra? Izany no izy!
Ity ny fanampiana
Mila miresaka? Manana Fanontaniana?
Raha te hiantso antsika amin'ny fitarihana ara-panahy isika, na hikarakara fitsaboana, dia aza misalasala manoratra amintsika any amin'ny photosforsouls@yahoo.com. Mankasitraka ny vavaka ataonareo izahay ary miandrandra ny hihaona aminareo any amin'ny mandrakizay!
Tsindrio eto raha hitady ny "fihavanana amin'Andriamanitra"
Copyright © 2018 Photos for Souls dia ministeran'ny The Wellsville Bible Church